Sergei Ramos oo farriin u diray Laacibka Maxamed Saalax, kadib dhaawicii ciyaartii xalay. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kabtanka Kooxda Real Madrid ee dalka Spain, Sergio Ramos oo isaga u sababa dhaawacii Ciyaaryahanka Kooxda Liverpool ee Maxamed Salaax xalay ka soo gaartay ayaa u rajeeyey Maxamed Saalax inuu si dhaqso leh uga soo bogsado dhaawaca ka soo gaaray Garabka.
Falkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu Sergei Ramos si caddowtooyo leh u gaarsiiyey Laacibkaas Xiddiga Reer Masar oo xalay 30-daqiiqo oo keliya ka ciyaaray Ciyaartii Finalka ee ay Kooxaha Real Madrid iyo Liverpool ugu baratamayeen Kooxka UEFA Champions League.
Saalax oo 44 gool xilligan u dhaliyey Kooxda Liverpool ee uu maamulo Juergen Klopp waxay xalay u ahayd Habeen Madow, waxaana la arkayey isagoo la ilmeynaya xanuunka dhaawacaasi.
Ciyaar-yahanka oo 25-jir ah ayaa waxaa shaki la gelinayaa inuu Xulkiisa Masar u safan doono Tartanka Koobka Adduunka ee lagu qaban doono dalka Raashiya.
Dhinaca kale, Sergio Ramos waxa uu ciyaarta kadib ku soo qoray Bartiisa Twitter-ka inuu u rajeynayo Saalax inuu awoodi doono inuu sida ugu dhaqsaha ah u soo laaban doono.
“Mararka qaarkooda K/cagta waxay ku tustaa dhinaca wanaagsan, marmarka qaarna dhinaca xun” ayuu yiri Sergio Ramos.
Waxa uu u rajeeyey Maxamed Salaax inuu isla waqtiga ku soo kabsado iyo inuu Mustaqbalka isaga sugayo.
Dhinaca kale, Taageerayaasha Liverpool iyo kuwa Masaarida waxay Twitter-kooda soo dhigeen Erayo ay ku cambaaraynayaan Sergio Ramos oo isaga u sabab ahaa dhaawacii Maxamed Saalax so ogaaray xalay, xilli ay ciyaartu maraysay 0-0.
Mid ka mid ah Taageerayaasha waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay: “Sergio Ramos ma heli doono Billad ee waxa uu heli doona Abaalmarinta Suunka ee Ciyaarta Legdinta Musaaricadda ee WWE belt.
Dhagayso Gudoomiyaha Baaralamaanka Galmudug” Ma aqoonsani Xildhibaanada ahlusunna”